မှျောဖနျလုံးလေးတှကေတဈဆငျ့ သငျ့အနာဂတျမှာ ဘယျလိုအရာတှကွေုံတှရေ့မလဲ ခနျ့မှနျးပေးမယျ – Youth Bar
မှျောဖနျလုံးလေးတှကေတဈဆငျ့ သငျ့အနာဂတျမှာ ဘယျလိုအရာတှကွေုံတှရေ့မလဲ ခနျ့မှနျးပေးမယျ
သငျ့အနနေဲ့ အနာဂတျမှာ စိနျချေါမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျကွုံတှရေ့မှာပါ။ ဘယျလိုအရာတှကေ သငျ့ကိုစိနျချေါလို့ သငျ့ဘကျက ရငျဆိုငျရမှာလဲ? အနာဂတျမှာ ဆကျလကျရှုစားကွညျ့ပေါ့နျော။ သငျဟာ စိနျချေါမှုတှကေို ရငျဆိုငျရမယျ့အပွငျ ဘဝတဈဆဈခြိုး ပွောငျးလဲသှားမယျ့ အရေးကွီးတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ခမြှတျရမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ မတှနျ့ဆုတျပါနဲ့။ ဖွေးဖွေးမှနျမှနျလေးနဲ့ စိတျအေးအေးထားပွီး ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ခမြှတျဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သငျ့ဘကျက တဈခုခုကို အောငျမွငျမှုရခငျြတယျဆိုရငျ အခုထဲက သခြောအာရုံစိတျပွီး လုပျဆောငျနိုငျမှ အနာဂတျမှာ အောငျမွငျမှာပါ။ ကိုယျနဲ့စိတျတူကိုယျတူ ဝါသနာတူတဲ့လူတှနေဲ့ ပိုပွီးရငျဘကျခငျြးနီးအောငျ လုပျဆောငျပါ။
သငျဟာ ဟာသဉာဏျရှိပွီး ပြျောပြျောနတေတျတဲ့ လူတဈယောကျပါ။ သူတဈပါးအပျေါ အကောငျးမွငျပေးတတျပွီး ဘယျအရာကိုမဆို စိတျအားထကျသနျစှာ အားသှနျခှနျစိုကျ လုပျဆောငျတတျပါတယျ။ ဘယျလိုတငျးမာတဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာမဆို ပွလေညျသှားအောငျ လုပျဆောငျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးရှိပါတယျ။ မကွာခငျအခြိနျအတှငျးမှာ သငျဟာ ပွဿနာကွီးတဈခုနဲ့ ရငျဆိုငျဖို့ အခွအေနရှေိနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စိတျမပူပါနဲ့။ သငျ့ရဲ့အကောငျးမွငျတတျတဲ့ စိတျကွောငျ့ ဒီပွဿနာကိုလညျး အေးအေးဆေးဆေး ကြျောလှားသှားနိုငျမှာပါ။ သငျ့ကိုအကွံပေးခငျြတာက ဘဝမှာ ဘယျလိုအခကျအခဲတှပေဲရှိရှိ အပွုံးမပကျြပဲ အကောငျးဘကျကနေ အမွဲဖွညျ့တှေးပေးပါ။ မိုးရှာပွီးရငျ နသောစမွဲမို့လို့ အခကျအခဲတှပွေီးရငျ ပြျောရှငျရမယျ့နရေကျတှေ ရောကျလာမှာပါ။
သငျဟာ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျပွီး ကိုယျ့အားကိုယျကိုးတတျတဲ့ လူတဈယောကျပါ။ ဘယျအရာကမှ သငျ့ကိုလှမျးမိုး ခြုပျကိုငျထားနိုငျစှမျး မရှိပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ သငျဟာ တခွားလူတှအေတှကျ မှီခိုအားထားရတဲ့ စှမျးရညျတှနေဲ့ ပွညျ့စုံပါတယျ။ ပွောရရငျ မိသားစုအတှကျ မှီခိုအားထားရတဲ့လူမြိုး ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှအေတှကျ အားကိုးရတဲ့လူမြိုး ၊ လကျအောကျငယျသားတှအေတှကျ ခေါငျးဆောငျကောငျးအရညျအခငျြးတှနေဲ့ ပွညျ့ဝတဲ့လူမြိုး ၊ သူငယျခငျြးတှထေဲမှာဆိုရငျ အနှံ့တာခံတဲ့လူမြိုးပေါ့။ အနာဂတျမှာ သငျဟာ သငျ့အကွောငျးမသိသေးတဲ့ လူတှကေို သငျ့အရညျအခငျြးတှေ၊ မလြှော့တဲ့ဇှဲနဲ့ မာကြောတဲ့စိတျဓာတျကို ပွသနိုငျမယျ့ အခွအေနမြေိုးနဲ့ ကွုံလာနိုငျပါတယျ။
သငျဟာ အနာဂတျမှာ သငျ့ကိုပငျပနျးဆငျးရဲစတေဲ့ အတိတျကနေ လှတျမွောကျနိုငျတော့မှာပါ။ အတိတျက အတိတျပါပဲ။ အတိတျကဖွဈရပျတဈခု ဒါမှမဟုတျ လူတဈယောကျကွောငျ့ သငျ့စိတျကို ညှငျးဆဲမနပေါနဲ့တော့။ အတိတျကို အတိတျမှာပဲ ထားခဲ့ပွီး စိတျသဈလူသဈနဲ့ ရှဆေ့ကျလြှောကျလှမျးလိုကျပါ။ ဒါပမေယျ့ ပိုကောငျးမှနျတဲ့ အနာဂတျသဈကို လြှောကျလှမျးနိုငျဖို့ သငျဟာ လကျတလောတော့ လုပျနကွေအလုပျတှကေို ခဏရပျထားပွီး လူတှနေဲ့အဝေးမှာနပွေီး ကိုယျ့စိတျကို အကောငျးဆုံးပွနျတညျဆောကျနပေါလိမျ့မယျ။ ဥပမာ – အားရပါးရငိုနတောမြိုး၊ စိတျတညျငွိမျစမေယျ့ အရာလေးတှေ လုပျနတောမြိုးတို့ဘာတို့ပေါ့။
သငျဟာ အနာဂတျကာလမှာ ပငျြးရိငွီးငှဖေို့ကောငျးတဲ့ လကျရှိအခွအေနကေနေ ရုနျးထှကျနိုငျမှာဖွဈပွီး ပွောငျးလဲမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျကွုံတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ဒီပွောငျးလဲမှုတှကေ သငျ့ဘဝကို တဈဆဈခြိုး ပွောငျးလဲသှားမှာဖွဈတဲ့ ကောငျးတဲ့အရာတှေ ဖွဈနိုငျသလို ဆိုးတဲ့အရာတှလေညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အကွံပေးခငျြတာက ယခုလကျရှိအခွအေနမှော ဘယျအရာကိုမဆို သခြောစဉျးစားဆုံးဖွတျပွီးမှ လုပျဆောငျပါ။ ဆုံးဖွတျထားတဲ့အရာတှကေိုလညျး တှနျ့ဆုတျမနဘေဲ ရဲရဲကွီးလုပျဆောငျပွီး အနာဂတျအတှကျ အစီအစဉျအသဈတှေ ခမြှတျပါ။
သငျဟာ ပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျပွီး အကောငျးမွငျတတျတဲ့အပွငျ သငျ့အတှကျ အနာဂတျမှာ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားမှုတှေ ရှိနမေယျလို့ အမွဲမြှျောလငျ့ထားသူ တဈယောကျပါ။ သငျတှေးတာ မှနျပါတယျ။ မကွာခငျအခြိနျအတှငျးမှာ သငျ့ထံကို အခှငျ့အရေးကောငျးတှေ ရောကျရှိလာမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ သငျ့အရညျအခငျြးတှကေို လူတှရှေမှေ့ောကျမှာ ခပြွခှငျ့ရမှာဖွဈပွီး ပညာရပျအသဈတှကေိုလညျး လလေ့ာဆညျးပူးခှငျ့ရမှာပါ။ နောကျတဈခုက အခဈြသဈနဲ့ ဆုံစညျးခှငျ့လညျး ရဦးမှာဖွဈပါတယျ။
credit to lotaya
သင့်အနေနဲ့ အနာဂတ်မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ဘယ်လိုအရာတွေက သင့်ကိုစိန်ခေါ်လို့ သင့်ဘက်က ရင်ဆိုင်ရမှာလဲ? အနာဂတ်မှာ ဆက်လက်ရှုစားကြည့်ပေါ့နော်။ သင်ဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရမယ့်အပြင် ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲသွားမယ့် အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လေးနဲ့ စိတ်အေးအေးထားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ဘက်က တစ်ခုခုကို အောင်မြင်မှုရချင်တယ်ဆိုရင် အခုထဲက သေချာအာရုံစိတ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်မှာပါ။ ကိုယ်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူ ဝါသနာတူတဲ့လူတွေနဲ့ ပိုပြီးရင်ဘက်ချင်းနီးအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
သင်ဟာ ဟာသဉာဏ်ရှိပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ သူတစ်ပါးအပေါ် အကောင်းမြင်ပေးတတ်ပြီး ဘယ်အရာကိုမဆို စိတ်အားထက်သန်စွာ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတင်းမာတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာမဆို ပြေလည်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိပါတယ်။ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ သင်ဟာ ပြဿနာကြီးတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့။ သင့်ရဲ့အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ဒီပြဿနာကိုလည်း အေးအေးဆေးဆေး ကျော်လွှားသွားနိုင်မှာပါ။ သင့်ကိုအကြံပေးချင်တာက ဘဝမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိ အပြုံးမပျက်ပဲ အကောင်းဘက်ကနေ အမြဲဖြည့်တွေးပေးပါ။ မိုးရွာပြီးရင် နေသာစမြဲမို့လို့ အခက်အခဲတွေပြီးရင် ပျော်ရွှင်ရမယ့်နေရက်တွေ ရောက်လာမှာပါ။
သင်ဟာ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ဘယ်အရာကမှ သင့်ကိုလွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သင်ဟာ တခြားလူတွေအတွက် မှီခိုအားထားရတဲ့ စွမ်းရည်တွေနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ ပြောရရင် မိသားစုအတွက် မှီခိုအားထားရတဲ့လူမျိုး ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက် အားကိုးရတဲ့လူမျိုး ၊ လက်အောက်ငယ်သားတွေအတွက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းအရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့လူမျိုး ၊ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆိုရင် အနွံ့တာခံတဲ့လူမျိုးပေါ့။ အနာဂတ်မှာ သင်ဟာ သင့်အကြောင်းမသိသေးတဲ့ လူတွေကို သင့်အရည်အချင်းတွေ၊ မလျှော့တဲ့ဇွဲနဲ့ မာကျောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ပြသနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ အနာဂတ်မှာ သင့်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲစေတဲ့ အတိတ်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်တော့မှာပါ။ အတိတ်က အတိတ်ပါပဲ။ အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် လူတစ်ယောက်ကြောင့် သင့်စိတ်ကို ညှင်းဆဲမနေပါနဲ့တော့။ အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့ပြီး စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းလိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်သစ်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ သင်ဟာ လက်တလောတော့ လုပ်နေကြအလုပ်တွေကို ခဏရပ်ထားပြီး လူတွေနဲ့အဝေးမှာနေပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို အကောင်းဆုံးပြန်တည်ဆောက်နေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ – အားရပါးရငိုနေတာမျိုး၊ စိတ်တည်ငြိမ်စေမယ့် အရာလေးတွေ လုပ်နေတာမျိုးတို့ဘာတို့ပေါ့။
သင်ဟာ အနာဂတ်ကာလမှာ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကနေ ရုန်းထွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုတွေက သင့်ဘဝကို တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တဲ့ ကောင်းတဲ့အရာတွေ ဖြစ်နိုင်သလို ဆိုးတဲ့အရာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြံပေးချင်တာက ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ ဘယ်အရာကိုမဆို သေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လုပ်ဆောင်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်း တွန့်ဆုတ်မနေဘဲ ရဲရဲကြီးလုပ်ဆောင်ပြီး အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်အသစ်တွေ ချမှတ်ပါ။
သင်ဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ပြီး အကောင်းမြင်တတ်တဲ့အပြင် သင့်အတွက် အနာဂတ်မှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေမယ်လို့ အမြဲမျှော်လင့်ထားသူ တစ်ယောက်ပါ။ သင်တွေးတာ မှန်ပါတယ်။ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ သင့်ထံကို အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ရောက်ရှိလာမှာပါ။ ဒါ့အပြင် သင့်အရည်အချင်းတွေကို လူတွေရှေ့မှောက်မှာ ချပြခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး ပညာရပ်အသစ်တွေကိုလည်း လေ့လာဆည်းပူးခွင့်ရမှာပါ။ နောက်တစ်ခုက အချစ်သစ်နဲ့ ဆုံစည်းခွင့်လည်း ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တဈရကျကို ငှကျပြောသီး (၃)လုံး စားပေးခွငျးဖွငျ့ ရရှိမညျ့ အံ့မခနျးအကြိူးကြေးဇူးမြား
သငျအလိုခငျြဆုံး လကျဆောငျပစ်စညျးကပွောပွမယျ့ သငျလိုခငျြနတေဲ့ခဈြသူပုံစံ ဖတျကွညျ့လိုကျတော့